Magazine Cover for April Issue | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
← Close Receiving Manuscripts for April Issue
ခွဲရေး၊ တွဲရေး →
March 21, 2008 · 10:05 am
Magazine Cover for April Issue
ဧပြီလထုတ် ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်း Vol.1, Issue.2 အတွက် ဖန်တီးထားသော မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျက်သရေဆောင် Image ဖြစ်သော ရွှေတိဂုံစေတီတော်နှင့် ကန်တော်ကြီး၏ ရှုခင်းအလှဖြစ်ပါသည်။ Archigrapher ၏ ဓာတ်ပုံလက်ရာကို ဒီဇိုင်းဟန်သစ်ငြိမ်က မွမ်းမံဒီဇိုင်းဖွဲ့ထားပါသည်။
7 responses to “Magazine Cover for April Issue”
တစ်ကယ် ကျက်သရေ ရှိတဲ့ မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းပဲ ခင်ဗျ 😀
ရန်ကုန်မြို့လို ကားကျပ်ကျပ် လူရှုပ်ရှုပ်မှာ ဒီလို ဓါတ်ပုံမျိုးလေး ဖန်တီးတဲ့ အတွေးလေး အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ
ကြက်သရေဆိုလို့ သွားရည်တွေ ယိုနေအုန်းမယ်
ကျက်သရေပါ.. ဆရာလုပ်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်
စာလုံးပေါင်း အလာဂျီရှိတဲ့ လူတွေဖတ်မိပြီး
ကြက်သရေရှိတယ်ဆိုတော့ ဘဲသားရေတွေ၊ ဆိတ်သားရေတွေ၊ နွားသားရေတွေ မရှိဘူးလို ဖြစ်ကုန်ပြီ… လုပ်ကြပါဦးဟ။ အဲဒီ ကြက်သားရေတွေ `ကျက်´ သွားတော့ စားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
I can’t read this burmese words at all. How can I do to read that? Please explain me .
ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ကျေးဇူးပါ မနိုင်နိုင်းစနေ။